Iflethi encinci ephuculiweyo eMarina di Maratea - I-Airbnb
Iflethi encinci ephuculiweyo eMarina di Maratea
Iflethi okanye indlu ekwicomplex ekwicomplex ekwicomplex esandul 'ukulungiswa, ekwicomplex engaselunxwemeni lweMaratea nenendawo yokupaka ezimeleyo. Istudiyo sinegumbi lokulala elivulekileyo neendawo ezintle zokubona iGulf of Belastro, igumbi lokuhlambela elinezinto zonke ezinokusetyenziswa, ikhitshi elibalulekileyo kunye nethala. Ilungele
nabani na ofuna ukonwabela ulwandle kunye nolwandle lwale ndawo intle yaseTyrrhenian okanye abo bakhetha iholide esebenzayo egcwele zizinto ezenziwa phandle.
Iflethi encinci inazo zonke izinto ezenza uzive uthe zava: igumbi lokuhlambela elinomatshini wokomisa iinwele, ishawa evulekileyo, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, i-terrace, ekhuselekileyo, i-TV, izitya ezibalulekileyo. Ibhedi nesitulo sokutyisela usana seendwendwe ezincinci nazo ziyafumaneka xa ziceliwe.
Indawo entle, iyakwazi ukudibanisa ubuhle bendalo yasendle kunye nolwandle kunye nobuhle bembali yedolophana yakudala. Nokuba ukhetha ukuphumla, ukutya okumnandi okanye imidlalo, le ndawo iza kukunika iholide engalibalekiyo.
Ndifumaneka ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo okanye iingxaki, ukuba kunokwenzeka ngeimeyile ngexesha lomsebenzi kodwa nangefowuni ngokuhlwa. Ukuba unezicelo ezikhethekileyo okanye iimfuno, ndiza kwenza konke okusemandleni am ukukwamkela...kwaye ndiza kukuvuyela ukucebisa ngamatikiti olwandle, iivenkile zokutyela kunye neendawo ezinika umdla kulo lonke ingingqi.
Ndifumaneka ukuze ndiphendule nayiphi na imibuzo okanye iingxaki, ukuba kunokwenzeka ngeimeyile ngexesha lomsebenzi kodwa nangefowuni ngokuhlwa. Ukuba unezicelo ezikhethekileyo oka…